Cuckoo Cabin - I-Airbnb
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguRoss & Wendy
URoss & Wendy yi-Superhost
Wamkelekile kwiKhabhinethi yaseCuckoo, esecaleni komthi omncinci kumaphandle aseStaffordshire. Ikhabhinethi yeCuckcoo ithatha i-glamping ukuya kwinqanaba elilandelayo ngokufudumeza okuphakathi, amanzi ashushu ahambayo kunye neshawa yamandla.
Ibekwe ngokufanelekileyo ukufikelela e-Eccleshall nakwiilali eziyingqongileyo. Ikhabhinethi yethu igqibelele ukumisa okufutshane, 20mins ukusuka J14&15 M6 & 1hr ukusuka kwisithili sasePeak/Alton Towers. Okanye yima kwimpelaveki epholileyo kwaye ujonge iindlela zeenyawo zalapha, imijelo kunye neendawo zentselo.
Izifundo zokukhwela iintshayelelo ngesicelo.
IKhabhinethi yaseCuckoo yi-5x4m 44mm ekhula ngokucothayo kwindlwana yespruce yaseScandinavia. Ixhomekeke kwiipropathi zendalo zokugquma iinkuni ukuze uhlale ufudumele kwaye womile. Uphahla lwenziwe ngentsimbi egqunyiweyo enika isandi esimnandi sokuphumla xa kunetha kwaye ulala ebusuku. Inkqubo yokufudumeza iyakwazi ukugcina indlu encinci ishushu kwaye ipholile ngoko ke inengxaki encinci yokubonelela amandla aneleyo okukugcina ukhululekile kwaye inomlinganiselo ongapheliyo wamanzi ashushu kwitephu unyaka wonke.
4.99 · Izimvo eziyi-99
Umbuki zindwendwe ngu- Ross & Wendy
Hi I'm Ross, I enjoy climbing and travelling and if possible try and combine the two! I really enjoy buying a guidebook and just exploring a new area and meeting new people.
Siyavuya ukunxibelelana nondwendwe lwethu kakhulu okanye kancinci njengoko uthanda. Sivaile ubumfihlo beendwendwe zethu ukuze ungene kuphela emaplangeni ubeka iinkuku zethu zoluhlu lwasimahla ebhedini. Ngexesha lokuhlala kwakho unokuqhagamshelana nathi ngefowuni okanye ngomyalezo wakwa-Airbnb.
Siyavuya ukunxibelelana nondwendwe lwethu kakhulu okanye kancinci njengoko uthanda. Sivaile ubumfihlo beendwendwe zethu ukuze ungene kuphela emaplangeni ubeka iinkuku zethu zoluhlu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Eccleshall